Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Da’ yar iyo Iswiidhan / Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha / Internet
Internet waxaa loo isticmaala wax yaalo badan oo kala duwan. Waxaad la xariiri kartaa asxaab iyo qaraabo. Waxaad uga hoowl gaari kartaa howlo bank ama la xariirka hey'add dowladeed. Waxeed ka heli kartaa su'aloo howliskuuleed jawaabtood, filin aa ka fiirsan kartaa, hees aa ka dheesan kartaa, waa ku ciyaari kartaa iyo in kale oo badan.
Waxaa jira waxyaabo ay tahay in qofku ka fikiro marka la isticmaalayo intarnatka. Intarnatka waa wax cajiib ah oo qofku wuxuu samayn karaa waxyaabo badan oo xiiso leh. Waxa kale oo qofka ku dhici karta dhibaato ama in si khalad ah dad kale looga caraysiiyo ama murugo lagu keeno haddii qofku aanu si fiican uga fikirin. Halka hoose waxaad ka helaysaa talooyin ah waxa aad ka fikiri kartid marka aad isticmaalayso intarnatka.
Ku xeelo dheereed internetka! 10 talo oo ku saabsan habka Aad internetka ku ahaneeysid
1. Ka fakar kow, kadib qabo.
Ka fakar inta aad galin qoraal, masawir ama wax ku qortid internetka. Waxa aad internetka galiso si dhaqso ah ayee uu faafi karaan. Waxeey olaan karaan "waligood". Yaa arki karo waxa aad galiso? Inta badan waa dooran kartaa qofka arki karo adiga kashanayo adeegyada bogga ku jiro.
Inta aada galin wax internet. Habkaan uu fakar: Marabi lahaay in fasalka dhan uu ogaado waxaan? Marabi lahaay in iskoolka dhan uu arko masawirkaan? Haddii ee jawaabta tahay maya, markaas ha galin internetka.
Markii aad qof kale wixiis wax ku qorto ama soo galiso masawir faafin xoog leh ayee yeelan kartaa adigoo ku fakarin in ee sidaas noqon karto. Wax yaalaha sida caadiga qosol lahaan karo, internetka wee ku qaldami karaa ama si qaldan ayaa loo turjimi karaa.
Waxa aad qabato dadka kale ayee sameeynaayaan. Waxa yaalaha nolosha runta ah ka mamnuc, sido kale internetka wee ka mamnuucan yihiin, tusaale ahaan takoorid ama been abuurid.
Inta aada wax ka sheegin ama soo galin sidaan ayaa uu fakari kartaa: Qofkaan waji-waji si toos ah ma ugu sheegi lahaa?
3. Yaa xariir la lee dahay?
Haddii aad qof internetka aad ka baratay la kulmeeyso m arka koobad waa in aad sii ahaata qof xeelo dheer. Qofka waxuu ahaan kara qof isku dayaayo in uu ku siro. Waxaad weeydiisa qofka da'diisa iyo iska weeydii su'alooyin aad iskaga kontarooleeyso.
Waligaa kaligaa ha la kulmin qof aad hada ka hor la kulin. Wado qof aad taqaano. Waqti iyo meel dad badan agtaada joogan doorta. Haddii aa la kulmeeyso qof asxaab ama qof weeyn uga waran, meesha aa ku kulmeeysana sheeg.
Ha la kulmin qof aada ogeen qof uu yahay.
4. Ma rabta in dadka kale uu sheegto wax kuugu saabsan?
Runtii, dadka kale maxaad la qeeybsanee? Ka fakar gorta iyo sababta aad uu bixineeyso warbixin adiga ku khuseeyso. Xoogaa ka sii fakar inta aada dhiibin tobanka-lambar, masawir xasaasi ah ama warbixin kuugu saabsan ama qof kale, gaar ahaan haddii aada rabin in ee dadka dhan ogaadaan.
Waligaa ha iska dhiibin warbixinta lagu galo meel iyo sirta.
5. Iska fiiri markasto meesha ee ka soo bilaabantay
Ya sameeyay bogga aad booqaneeyso? Maxaa loo sameeye? Bogg ama wax kasto oo la soo dhigo qof ayaa ula jeedo ka leh. Ma waxeey ka tahay warbixin, xayeeysiin, lacag helid ama in dadka kale isla fikrada lagu abuuro?
In badan aad ka akhriso oo aadna ku aragto internetka ma ahan run.
Warbixinta waxeey ahaan kartaa mid qalad ah ama mid uu qof wareejiyay. Waa muhiim in aad daalacsanaato markii aad wax ka akhrineeyso internetka. Si daalacsanaan leh uga fakara, iskana kontarool qoraal inta aad soo qaadin/koobiyeen.
Marka internetka wax ka akhrineeyso sidaana uu fakari kartaa: Yaa qoray qoraal iyo sabab?
6. Masawir iyo warbixin qaadid
Haddii aad dooneeyso in aad qof qoraalkiis soo qaado ama isticmaasho masawir, sheeg meesha aad ka soo qaaday. Sharciga jiro la soco. Haddii aad uu aragto in ee kuu adagtahay ogaanshaha waxa la isticmaali kara si xur ah, iyo qof kale waxuu lee yahay oo qoraal iyo masawir ah, waxaa fiicnaa karto in aad weeydiso macalinka ama qof kale oo weeyn.
7. Mawqif sax eh lahaaw
Mawqifyada aad qaadeeynso ogaaw si aad kontarool uga lahaato wax yaalaha aad soo galineeyso iyo masawiradaada. Ogaaw shuraadaha isticmaalida bogga ama ciyaarta. Ma jiraan sharciyo khuseeyo habka loo dhaqmaayo? Ka akhriso bogga ama qof weeyn weeydii
8. Iska weeydii
Haddii aad rabto in aad soo galiso masawiro aad lee dahay oo qof kale ku jiro, wee fiican tahay in la weeydiiyo qof kale inta aada soo dhigin internetka. Qof kale haddii uu lee yahay masawirka waa in aad iska weeydisa – qofkaas aa masawirka leh, dadka dhamaantoodna masawiradooda internetka uma rabaan.
Inta aada galin masawirka sidaan uu fakar: Aniga masawirka haddii uu ahaan lahaa ma rabi lahaa in aan galiyo?
9. Internet in wax laga gato
18 sano qofka ka hoseeyo internetka waa ka mamnuuc in uu wax ka gato. Waa in uu qof weeyn ansaxo lacag dhiibida, laakin waxaa jiro ka reebnaansho.
Marmarka qarkood lacag qarsoodi ah ayaa ku jiro karto. Waxee adkeeyn kartaa in la ogaado waxa inte ka joogaan bogga ama ciyaarta. Iska weeydii qof og habka ee uu shaqeeyso inta aada wax ka gadan ama ku iibin internetka si aa iskaga yareeyso khatarta sirida.
10. Adiga xukuntid qofka aad la xariireeyso
Haddii aad dareeynsan tahay in san fiicneen xariirka waa jari kartaa. Waxaad xaq uu lee dahay in aad maya tiraado oo joojiso. Adiga xakumo waxaa adiga aqbali karto. Haddii aad hubin qof aad ku kalsoon tahay ayaa weeydiin kartaa. Qof weeyn caawinad weeydisoo haddii aad ka dareeynsan tahay dareen aan fiicneen ama yaab.